TAMBIN-KARAMAN’NY MPAMPIANATRA FRAM : Mandrahona ny tsy hampanao “CEPE” ny ao Amboasary Atsimo
Mbola tsy voavaha hatreto ny olan’ny mpampianatra Fram mahakasika ny tambin-karama, izay mbola tsy voaloa efa nitondrana fitarainana am-bolana maro. 12 juillet 2019
Eo anatrehan’izany indrindra dia fantatra tamin’ny angom-baovao voaray amin’izao fotoana fa mandrahona ny tsy hampanao ny fanadinam-panjakana Cepe ireo mpampianatra Fram ao anatin’ny Distrikan’ Amboasary Atsimo, Faritany Toliara. Tsy mbola voaray mandraka androany ny tambin-karama fito volana, hoy hatrany ny fitarainan’izy ireo, hany ka tsy maintsy maneho ny hatezerana mba hitadiavan’ny tompon’andraikitra mahefa ny vahaolana.
“Mbola mamerina ny antso avo izahay satria mamelom-bady aman-janaka, izay ahiana ara-pahasalamana, ara-tsakafo, ara-pianarana ary ara-pivelomana”, araka ny nambaran’ny solontenan’ireo mpampianatra Fram any an-toerana. Tsara moa ny manamarika fa hotanterahina ny 27 aogositra 2019 ho avy izao ny fanadinana Cepe manerana ny tanin’ny Repoblikan’i Madagasikara. Miisa 524 997 ny isan’ny mpiadina hiatrika io fanadinana ara-panjakana voalohany io, ka mpianatra manana fahasembanana ny 82 amin’izy ireo. Arahina akaiky moa hatreto ny tohin’ny raharaha ao Amboasary Atsimo manoloana izao fitarainana izao.
Jiolahy mpandroba izy roalahy maty voatifitra fa tsy tanora mpianatra AMBALAKISOA TOAMASINA (215) 20 janvier 2020 Nahatratra hosoka miisa 89 tamin’ny fidirana ho miaramila ETAMAZAORO JENERALIN’NY TAFIKA (194) 20 janvier 2020 Naato tamin’ny asany ny Lehiben’ny Pompiers FIHOTSAHAN’NY TANY TENY AVARADOHA (133) 21 janvier 2020 Miatrika famotorana lalina ny tale jeneraly teo aloha ORINASA KRAOMITA MALAGASY (124) 22 janvier 2020 Nahitana fatim-behivavy tsy nisy loha novonoina tao Analaradjy SAINTE-MARIE (116) 20 janvier 2020 Mpampianatra 500 mahery nahazo fifanarahana arak’asa FANABEAZAM-PIRENENA (96) 20 janvier 2020